Tsy mbola napetraky ny eo anivon’ny fahefana mpanatanteraka hatramin’izao ny Filankevitry ny Fampihavanana malagasy sy ireo olona handrafitra azy io. Na misy aza ny fametrahana azy io, mbola tsy mazava sy tsy voafaritra ny asa miandry azy ireo. Mitovy tsy misy valaka amin’ny FFM teo aloha ihany, raha toa ka tsy misy soritrasa mazava hotontosain’izy ireo. Tsy natao hizara famotsoran-keloka fotsiny ny mpikambana eo anivon’ny FFM fa arofanina tsy hisian’ny krizy eto amin’ny firenena mihitsy.
Hanatanteraka hetsika ny RMTF
Nanatontosa fivoriana tetsy Andravoahangy Ambony ny Rodoben’ny Malagasy ho an’ny tolona fanorenana ifotony, omaly. Nivoitra nandritra ny fihaonan’izy ireo ny fidinana etsy amin’ny Kianjan’ny 13 mey, ny sabotsy izao. Nambaran’izy ireo, fa fotoana izao hamondronana ny hery hanoherana ny fitondrana mampahantra vahoaka izao. « Ampy izay ny kiantranoantrano sy ny kolikoly ary ny fanjakazakan’ireo tsimatimanota », hoy hatrany ny avy eo amin’ny RMTF. Ho tonga hatraiza izao hetsika tanterahin’izy ireo izao ?
Hanatanteraka fihaonana miaraka amin’ny fiarahamonim-pirenena sy ny haino aman-jery momba ny fifampizarana ny torohay sy ny dingana amin’ny fanatanterahana ny fifidianana, ny eo anivon’ny Vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana na ny Ceni, anio. Tombanana hodinihina ao anatin’izany ny fiaraha-miasa sy ny mety ho endriky ny fiaraha-misalahy amin’ny fiatrehana ny fifidianana hoavy. Etsy amin’ny foiben-toeran’ny Ceni etsy Alarobia no hanatontosana io fihaonana io.